Baskety - Sekoly ambony :: Hahemotra ny « Smatch’In » andiany fahasivy • AoRaha
Baskety – Sekoly ambony Hahemotra ny « Smatch’In » andiany fahasivy
Fandaharam-potoana nosimbain’ny valanaretina Covid-19. Hihemotra indray ny fanatanterahana ny andiany fahasivy amin’ny fifaninanana basket-ball ho an’ ireo sekoly ambony na ny “Smatch’In” amin’ity taona 2021. Vinavinainy hatao amin’ ny fotoana tsy mbola voafaritra ny andiany manaraka, araka ny fanapahan-kevitra noraisin’ny mpikarakara.
Amin’ny 17 ka hatramin’ ny 25 avrily ho avy izao no fepotoana voatondro hanaovana ny ny fifaninanana, etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina ary nokasaina hovitaina arakaraka ny fivoaran’ny ady amin’ ny Covid-19. Misy anefa ny fepetra napetraky ny fanjakana manoloana ny toe-draharaha ara-pahasalamana eto amin’ny firenena ary voakasik’izany hatrany ireo hetsika ara-panatanjahantena ho fiarovana amin’ny fiparitahan’ ny valanaretina.
“Mbola tsy voafaritra ny daty vaovao hatreto. Hisy fivoriana teknika hiarahana amin’ny sekoly mpandray anjara handinihana ny fandaharam-potoana sy ny raikipohy hitondrana ny fifaninanana”, araka ny fampitambaovao avy amin’ny mpikarakara ny hetsika “Smatch’In”.
Rugby – Lalao olimpika :: Hanoman-tena any Tonizia ny Makis vehivavy